ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်အား အသင်းခေါင်းဆောင်နေရာပေးရန် ဆိုးရှားလ်အားဖာဂူဆန်ပြော – FBV SPORT NEWS
မန်ချက်စတာယူနိုက်စ်မှာ ဆိုးရှားလ်ဟာ ချန်ပီယံပွဲအဖြစ် ပြင်သစ်မြေမှာ PSG နဲ့ ကန်တဲ့ပွဲမှာ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ်အားအသင်းခေါင်းဆောင် ခန့်ခဲ့ပြီး မက်ကွိုင်းယားကို အနားပေးခဲ့ပါတယ်…မန်ချက်စတာယူနိုက်စ် ဂန္တဝင်နည်းပြကြီး ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်ကတော့ အသင်းခေါင်းဆောင်နေရာကို မက်ကွိုင်းယား အစား ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်််််ကို ပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို MUTV မှာ ယခုလိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်….
ဖာဂူဆန်က ” မန်ယူအသင်းမှာ လက်ရှိအသင်းခေါင်းဆောင် နေရာအတွက် အနညးငယ်ပြောချင်ပါတယ်…အဲ့ဒါကတော့ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ကို အမြဲတမ်း အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်ခန့်အပ်သင့်တယ်ဆိုတာပါဘဲ….ဘာဖြစ်လို့ ဘရူနိုကိုပေးသင့်တာလဲလို့မေးကြမယ် ထင်ပါတယ်….
မက်ကွိုင်းယားကရော အသင်းခေါင်းဆောင် မဖြစ်ထိုက်ဘူးလား ဆိုတော့ သူလည်းကောင်းပါတယ်….ဒါပေမဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်ဆိုတာ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံနိုင်မှု စိတ်ရှိရမယ် အရေးကြီဆုံးက နိုင်လိုစိတ်ပြင်းပြရမယ် အသင်းသားတွေကို မခွဲခြားဘဲ ဆက်ဆံရမယ် ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုအများကြီးရှိရမယ်……
အဲ့ဒီအချက်တွေကို PSG နဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာ အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ်ဆီမှာ ကျနော်မြင်ခဲ့ရပါတယ်..သူဟာတသင်းလုံးပတ်ကစားတယ် အားနည်းချက်တွေကို ကစားနေရင်းမြင်တော့ ထောက်ပြတယ် သူအော်ပြောနေတာတွေမြင်ခဲ့ရတယ်……
မက်ကွိုင်းယားမှာ အဲ့လို အချက်တွေလိုအပ်နေပါသေးတယ် အသင်းခေါင်းဆောင်က အဲ့လိုအချက်တွေမရှိခဲ့ရင် အသင်းသားတွေရဲ့ ရုန်းအားက တဖြည်းဖြည်းကျလာတယ်ဆိုတာကို မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ချဲလ်ဆီးနဲ့ပွဲဘဲကြည့်ပါ ပထမတပိုင်းလုံး အရမ်းအားမစိုက်ခဲ့ကြပါဘူး ဒီလို မျိုးအခြေနေဆို အသင်းခေါင်းဆောင် က ထိမ်းရမယ်လေ…..ကျနော် ဗီဒစ်ကိုဘာလို့ အသင်းခေါင်းဆောင်ပေးခဲ့လဲဆိုတာက အပေါ်ကအချက်တွေရယ် နိုင်လိုစိတ်ပြင်းလွန်းတဲ့အချက်တွေကြောင့် ပေးခဲ့တာပါလို့ MUTV မှာပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်…
မန်ယူကစားကွက်အရ နေရာမရနိုင်သောကစားသမားနှစ်ဦးကို ရိုင်ယန်ဂစ်ပြော…